Macluumaadka-QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Waxsoosaarka wax-qabadka hooseeya wuxuu u nugul yahay saameynta demagnetizing sababo la xiriira meelaha magnetka dibedda, shoogga, iyo heerkulka dalabka. Codsiyada muhiimka ah, magnets Alnico waa lagu xasilin karaa si loo yareeyo saameyntaan Waxaa jira afar fasal oo magnet ganacsi oo casri ah, mid walbana wuxuu ku saleysan yahay waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Fasal kasta dhexdiisa waxaa ku jira qoys fasallo leh astaamo magnet oo u gaar ah. Fasalladaan guud waa:
NdFeB iyo SmCo waxaa si wada jir ah loogu yaqaanaa 'Rare Earth magnets' maxaa yeelay waxay labaduba ka kooban yihiin waxyaabo ka kooban koox yar oo ka kooban waxyaabo kooban. Neodymium Iron Boron (guud ahaan halabuurka Nd2Fe14B, badiyaa loo soo gaabiyo NdFeB) ayaa ah kii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay ee lagu daro qoyska qalabka magnetka casriga ah. Heerkulka qolka, magnets NdFeB waxay soo bandhigaan sifooyinka ugu sareeya dhamaan qalabka magnetka. Samarium Cobalt waxaa lagu soo saaray laba halabuur: Sm1Co5 iyo Sm2Co17 - oo badanaa loo yaqaan noocyada SmCo 1: 5 ama SmCo 2:17. 2:17 noocyada, oo leh qiyamka sare ee Hci, waxay bixiyaan xasillooni ka soo dhex baxda noocyada 1: 5. Ceramic, oo sidoo kale loo yaqaan Ferrite, magnets (guud ahaan halabuurka BaFe2O3 ama SrFe2O3) ayaa la suuq geeyay ilaa 1950-meeyadii oo ay sii wadaan in si ballaadhan loo isticmaalo maanta qiimahooda oo hooseeya awgeed Nooc gaar ah oo ka samaysan magnet-ka dhoobada ayaa ah "Dabacsanaan" alaab ah, oo lagu sameeyay iyadoo lagu xidhayo budada Ceramic ee giraanta jilicsan. Magnooyinka Alnico (guud ahaan halabuurka Al-Ni-Co) waxaa ganacsi ahaan loo sameeyay 1930-yadii ilaa maantana si ballaaran ayaa loo adeegsadaa.
Tilmaam: Qaabab kale ayaa lagu soo saari karaa iyada oo loo eegayo muunadda macaamiisha ama daabacaadda buluugga ah